समाजको बेथितीमाथी सिचुएशनल कमेडी (फिल्म समिक्षा–जात्रै जात्रा) | Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal Site
Home / Article / Main News / News / Slider / समाजको बेथितीमाथी सिचुएशनल कमेडी (फिल्म समिक्षा–जात्रै जात्रा)
समाजको बेथितीमाथी सिचुएशनल कमेडी (फिल्म समिक्षा–जात्रै जात्रा)
— May 19, 201901290
फिल्मी फण्डा । फिल्म समाजको दर्पण हो । यहि सन्दर्भमा रहेर कति फिल्महरु सान्दर्भिक हुन सके, कति असान्दर्भिक । तर, यस मध्येको एक सान्दर्भिक फिल्म हो जात्रै जात्रा । कमेडी फिल्मको बाढी नेपाली फिल्ममा आईरहँदा त्यस बीचमा थपिएको फिल्मको सुचिमा जात्रै जात्रा पनि रहेको छ । कमेडी फिल्म बनाउन कै लागि जबर्जस्त हसाउँने शैलीका संवाद तथा अनावश्यक सिनहरु राख्ने परम्परा बढ्न थालेको छ । त्यसबाट भने जात्रै जात्रा पूर्ण रुपमा मुक्त छ ।
समाजको वास्तविक घटना र बेथितीलाई जात्रै जात्राले सिचुएशनल कमेडी शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ । यस कारण फिल्म अब्बल बनेको छ । यसको प्रमुख श्रेय भने निर्देशक प्रदिप भट्टराईलाई जान्छ । सिक्वलेको नाममा सिरिज बनाएर दर्शक झुकाउन निर्देशकहरु सफल भईरहँदा वास्तविक सिक्वेलको अर्थ भने जात्रै जात्राले प्रस्ुतत गरेको छ । फिल्मको यो अर्को बलियो पक्ष हो । फिल्मको कथा, पात्र र घटनाक्रमलाई निर्देशक प्रदिप भट्टराईले कलात्मक शैलीमा बुनेको छ ।
जहाँ फिल्म जात्रा सकिएको थियो त्यहि बाट शुरु हुन्छ जात्रै जात्राको कथा । उहि तीन पात्रहरु फणिन्द्र (विपिन कार्की), जोयश (रविन्द्र सिंह बानियाँ) र मुन्ना (रविन्द्र झा) २ करोड ८० लाखको काण्डमा जेल बसेका हुन्छन् । अनुसन्धानको क्रममा निर्दोष सावित पछि सरकारको क्लिन चिटमा थुना मुक्त हुन्छन् । बाहिर आएपनि तीनै जनाको जीवनशैली भने उस्तै । कानुनले अपराधी हैन भनी प्रमाणित गर्दा पनि समाज र छर छिमेकबाट अपराधीकै व्यवहार उनीहरुमा निरन्तर पर्छ । यहि बीचमा परिवार पनि सबैको टाढिएका छन् ।
पहिलेजस्तै जीवन चलाउनकै कठिन छ तीन जना पात्रलाई । यहि बीचमा फणिन्द्रले ट्याक्सी चलाउन शुरु गर्छ । मुन्नाले पनि आफ्नै बलबुट्टाले कपाल काट्ने काम शुरु गर्छ । एक दिन फणिन्द्रको ट्याक्सिमा दावा (दयाहाङ राई) समूहले सुन तस्करी गर्ने योजना सहित गईरहेको हुन्छ । बीच बाटोमा दावाको समूहलाई अपहरण गरेपछि फणिन्द्र ट्याक्सी लिएर फर्कन्छ । तर, सुन त्यहि ट्याक्सिमा हुन्छ । उक्त सुनलाई फणिन्द्रले आफुसँगै राख्छन् ।
यता दावा समूह सुनको खोजीमा फणिन्द्रको पछि लाग्छन् । फणिन्द्र सुनलाई गोप्य रुपमा राख्न अनेक जुक्ति निकाल्छन् । त्यहि बीचमा मुन्ना र जोयशलाई पनि थाहा हुन्छ । पारिवारीक हिसाबले समस्या परेका तीन जनै पात्रहरुले १० किलो सुन पचाउने जुक्तिको खोजी गर्छ । यता फण्न्द्रिको बुढी शम्पु (बर्षा राउत) र छोराले आफन्तको घरमा बेहोर्नु परेको पिडाका कारण फाणिन्द्र सुन पचाउने सोचमा पुग्छ । त्यसमा विस्तारै शम्पुले पनि साथ दिन्छ ।
अब सुन पच्छ की पच्दैन । तीन जनै पात्रहरुको सपना पुरा हुन्छ की हुदैन ? यहि प्रश्नको उत्तरमा फिल्म घुमेको छ । फिल्मको शुरुवाटदेखि अन्तिमसम्म यस्तै शिलशिलामा फिल्म अघि बढ्छ । मनोरञ्जनको खुराकलाई निर्देशकले भरपुर प्रयोग गरेका छन् । त्यो पनि सान्दर्भिक र स्वभाविक तरिकाले । जात्रा भन्दा जात्रै जात्रा विषयवस्तुको तरिकाले उस्तै लाग्छ । तर प्रस्तुतीको हिसाबले अझ अब्बल छ । फिल्मले हसाउँदैन मात्र बीच बीचमा भावुक पनि बनाउँछ । फणिन्द्रका छोराले दर्शकलाई चसक्क बनाईदिन्छ । शम्पु पात्रले पनि कहिँ कतै भावुक बनाउँछ । फणिन्द्रको लुकिछिपी प्रेम फिल्मको अर्को बुट्टा हो ।
राम्रौ हुदाँहुदै केही अस्वाभाविक सिनहरु पनि छन् । ट्याक्सिमा गएको दावालाई कसले बीच बाटोमा अवरोध गर्यो ? किन र के का लागि अपहरण गर्यो ? निर्देशकले प्रष्ट देखाउन सकेको छैन । सामाजिक कुरीतीको रुमा रहेको धामी, झाक्री, माता प्रथालाई फिल्मले प्रथामिकता दिएको छ । जुन अस्वभाविक पनि छ । माताले सुन पच्ने नपच्ने वारे बोल्दा असान्दर्भिक लाग्छ । फिल्ममा यसको आवश्यकता खासै प्रभावकारी लाग्दैन । काठमाडौंमै रहेको सुन र पैसालाई पोखरा पुराइएको छ । १० किलो सुन किन्न बोरामा करौडौं बोकेर व्यापारी पोखरा पुग्नु सान्दर्भिक लाग्दैन । तरपनि यस्ता केही कुरालाई बिर्सने हो भने फिल्म उत्कृष्ट छ ।
दयाहाङ राई, राजाराम पौडेल, कालु राना फिल्ममा बोनस पात्रहरु हुन् । यी पात्रहरुले फिल्मको प्रस्तुतीकरणलाई फराकिलो बनाएको छ भने घटना क्रमलाई विषयगत तरिकाले उत्थान गर्न सहज बनाएको छ । फणिन्द्र, मुन्ना र जोयशको कामको प्रशंशा जात्रामा पनि भएकै हो । यसमा त नहुने कुरै भएन । विपिन कार्की एक पछि अर्को फिल्ममा यस्तै पात्रको लागि अझ अब्बल र दर्शकको आशा बन्दै गईरहेको छ ।
जात्रामा गीत थिएन । तर, पनि फिल्मले राम्रै प्रशंशा पाएको थियो । जात्रै जात्रामा भने दुई वटा गीतहरु समावेश गरेका छन् । दुबै गीत कथासँगै बाँधिएर आउने भएकोले स्वभाविक देखिएको छ । दुबै गीतलाई दर्शकले रुचाएका छन् । केही केही ठाउँमा ब्याकराउण्ड म्युजिक केही लाउड छन् । सम्पादन पक्ष बलियो छ । फिल्मको सिनेमाटोग्राफि पनि बलियो पक्ष हो ।
मूख्य पात्रहरुसँग जोडिएका सहायक पात्रहरुलाई पनि निर्देशकले कथासँगै पूर्ण रुपमा बाँधिएका छन् । सुन काण्ड सहितका समाजका बेथितीलाई व्यङ्ग्यात्मक तिखो प्रहार त गरेका छन् । तर, फिल्मबाट समाजले सिकिहाल्ने खासै खुराक भन्ने छैन । सरसर्टि हेर्दा जात्रा पछि जात्रै जात्रामा केही कमर्सियल सोचबाट फिल्मलाई माथी उठाउन भने निर्देशकले खोजेका छन् । विषयवस्तुको संरचना, पात्र, लोकेशन र प्रोडक्शन भ्यालुले त्यो देखाउँछ ।
नेपाली फिल्ममा सिक्वेल भनेर दर्शक झुकाईरहेका निर्देशकहरुलाई भने जात्रै जात्राले वास्तविक सिक्वेलको एउटा पाठ पक्कै सिकाउँछ । सँगसँगै सुनकाण्ड मात्र नभई घरेलु हिंसा र वर्गीय विभेदलाई पनि फिल्मले प्रस्तुत गरेको छ । तसर्थ समाजमा रहेका बेथितीलाई सिचुएशनल कमेडीमा प्रस्तुत गरेको फिल्मले शुरुदेखि अन्तसम्म दर्शकलाई सन्तुष्ट बनाएको छ ।
निर्माता : षट्कोण आर्टस्
पात्रहरु : विपिन कार्की, दयाहाङ राई, रविन्द्र सिंह बाँनिया, रविन्द्र झा, बर्षा राउत आदि
Tagged with: barsha raut, bipin karki, dayahang rai, film review, jatrai jatra review, nepali movie jatrai jatra, pradip bhattarai, rabindra jha, rabindra singh baniya
Previous Article यहि बर्ष लगनगाँठो कस्ने सेलिब्रेटीहरु
Next Article मेक्सम र सपनाको "जुनी जुनी" (गीत)